05.07.20 Avyakt Bapdada Nepali Murli 20.02.86 Om Shanti Madhuban
उड्तीकलाले सर्वको भला
आज विशेष डबल विदेशी बच्चाहरूलाई डबल बधाई दिन आउनु भएको छ। पहिलो– दूरदेशमा भिन्न धर्ममा भएर पनि नजिक भारतमा रहने अनेक आत्माहरू भन्दा चाँडो बाबालाई चिन्यौ। बाबालाई चिनेकोमा अर्थात् आफ्नो भाग्यलाई प्राप्त गरेकोमा बधाई। दोस्रो– जसरी तीव्रगतिले चिन्यौ त्यसैगरी तीव्रगतिले सेवामा स्वयंलाई लगायौ पनि। त्यसैले सेवामा तीव्रगतिले अगाडि बढेकोमा डबल बधाई छ। सेवाको वृद्धिको गति तीव्र रहेको छ र पछि पनि डबल विदेशी बच्चाहरूलाई विशेष कार्य अर्थ निमित्त बन्नु छ। भारतका निमित्त आदि रत्न विशेष आत्माहरूले स्थापनाको कार्यमा बहुत मजबुत बनेर कार्यको स्थापना गरे र तिमी डबल विदेशी बच्चाहरूले चारैतिर आवाज फैलाउनमा तीव्रगतिको सेवा गर्यौ र गर्दै पनि रहनेछौ। त्यसैले बापदादाले सबै बच्चाहरूलाई आउनासाथ, जन्मनासाथ धेरै चाँडो सेवामा अगाडि बढेकोमा विशेष बधाई दिइरहनु भएको छ। थोरै समयमा भिन्न-भिन्न देशमा सेवालाई विस्तार गरेका छन् त्यसैले आवाज फैलिने कार्यले सजिलै वृद्धि प्राप्त गरिरहेको छ। सदा डबल लाइट बनेर डबल ताजधारी बन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त गर्नको लागि तीव्र पुरुषार्थ अवश्य गर्नेछन्। आज विशेष मिल्नको लागि आएको छु। बापदादाले देखिरहनु भएको छ सबैको दिलमा खुसीको बाजा बजिरहेको छ। बच्चाहरूको खुसीको सङ्गीत, खुसीको गीत बापदादाले पनि सुनिरहनु भएको छ। याद र सेवामा लगनले अगाडि बढिरहेका छन्। याद पनि छ सेवा पनि छ, अब थप्नु पर्ने के छ? छ दुवै नै तर सदा दुवैको सन्तुलन रहोस्। यो सन्तुलनले स्वयंलाई सेवामा बाबाको आशीर्वादको अनुभवी बनाउँछ। सेवाको उमंग-उत्साह रहन्छ। अरू अझै सेवामा याद र सेवाको सन्तुलन राख्नाले धेरै आवाज राम्रोसँग विश्वमा गुञ्जिने छ। विस्तार राम्रो गरेका छन्। विस्तारपछि के गरिन्छ? विस्तारको साथसाथै अब अरू पनि सेवाको सारमा यस्ता विशेष आत्माहरूलाई निमित्त बनाउनु छद जुन विशेष आत्माहरूले भारतका विशेष आत्माहरूलाई जगाऊन्। अहिले भारतमा पनि सेवाको रूपरेखा समय प्रमाण अगाडि बढ्दै गइरहेकोछ। नेताहरू, धर्मनेताहरू र साथ-साथै अभिनेताहरू पनि सम्पर्कमा आइरहेका छन्। बाँकी को रहेको छ? सम्पर्कमा त आइरहेका छन्, नेताहरू पनि आइरहेका छन् तर विशेष राजनेताहरूसम्म पनि समीप सम्पर्कमा जाने संकल्प उत्पन्न गर्नु छ।
सबै डबल विदेशी बच्चाहरू उड्तीकलामा गइरहेका छौ नि! चढ्ती कलावाला त होइनौ नि! उड्तीकला छ? उड्तीकला हुनु अर्थात् सर्वको भला हुनु। जब सबै बच्चाहरूको एकरस उड्तीकला बन्छ तब सर्वको भला अर्थात् परिवर्तनको कार्य सम्पन्न हुन्छ। अहिले उड्तीकला छ तर उड्तीकलाको साथ-साथै त्यसमा स्थितिहरू पनि हुन्छन्। कहिले धेरै राम्रो स्थिति हुन्छ र कहिले त्यही स्थितिको लागि पुरुषार्थ गर्नु पर्ने स्थिति हुन्छ। सदा र धेरैजसोको उड्तीकला हुनु अर्थात् समाप्ति हुनु हो। अहिले सबै बच्चाहरूले जानेका छन्– उड्तीकला नै श्रेष्ठ स्थिति हो। उड्तीकला नै कर्मातीत स्थितिलाई प्राप्त गर्ने स्थिति हो। उड्तीकला नै देहमा रहेर देहबाट न्यारा र सदा बाबाको र सेवाको प्यारोपनको स्थिति हो। उड्तीकला नै विधाता र वरदाताको स्थिति हो। उड्तीकला नै हिँड्दा-डुल्दा फरिश्ता वा देवता दुवै रूपको साक्षात्कार गराउने स्थिति हो।
उड्तीकलाले सर्व आत्माहरूलाई भिखारीपनबाट छुटाएर बाबाको वर्साको अधिकारी बनाउँछ। सबै आत्माहरूले अनुभव गर्नेछन्– हामी सबै आत्माहरूका ईष्टदेव तथा ईष्टदेवीहरू अथवा निमित्त बनेका जति पनि अनेक देवताहरू छन् सबै यो धरतीमा अवतरित भएका छन्। सत्ययुगमा त सबै सद्गगतिमा हुनेछन् तर यस समयमा जति पनि आत्माहरू छन् तिनीहरू सर्वका सद्गतिदाता तिमीहरू हौ। जसरी कुनै पनि ड्रामा जब समाप्त हुन्छ तब अन्त्यमा सबै कलाकारहरू मञ्चमा सामुन्ने आउँछन्। अहिले कल्पको ड्रामा समाप्त हुने समय आइरहेको छ। सारा विश्वका आत्माहरूलाई चाहे स्वप्नमा, चाहे एक सेकेण्डको झलकमा, चाहे प्रत्यक्षताको चारैतिरको आवाजद्वारा, यो अवश्य साक्षात्कार हुनु छ– यो ड्रामाका हीरो पार्टधारी मञ्चमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन् भन्ने। धरतीका सिताराहरू धरतीमा प्रत्यक्ष भइसकेका छन्। सबैले आ-आफ्ना ईष्टदेवलाई प्राप्त गरेर धेरै खुसी हुनेछन्। सहारा मिल्छ। डबल विदेशीहरू पनि ईष्ट देव तथा ईष्टदेवीहरूमा छौ नि! अथवा गोल्डन जुबलीवाला छौ? तिमीहरू पनि त्यसैमा छौ वा हेर्नेवालामा हौ? जसरी अहिले गोल्डन जुबलीको दृश्य देख्यौ। यो त एउटा रमणीक पार्ट मात्र खेलेका हौ। तर जब अन्तिम दृश्य हुनेछ त्यसमा त तिमीहरू साक्षात्कार गराउनेवाला हुन्छौ वा देख्नेवाला हुन्छौ? के हुन्छौ? हीरो हौ नि। अहिले त्यो दृश्यलाई प्रकट गर– कस्तो हुन्छ? यही अन्तिम दृश्यको लागि अहिलेदेखि नै त्रिकालदर्शी बनेर हेर– कस्तो सुन्दर दृश्य हुनेछ र हामी कति सुन्दर हुनेछौं। सजिएका दिव्य गुणमूर्त फरिश्ता सो देवता देखिनेछौ। यस्कालागि अहिलेदेखि नै आफूलाई सदा फरिश्ता स्वरूपको स्थितिको अभ्यास गर्दै अगाडि बढ्दै रहनु छ। जुन चार विशेष विषय छन्– ज्ञानमूर्त, निरन्तर यादमूर्त, सर्व दिव्यगुणमूर्त तथा सेवा। एउटा दिव्य गुणको पनि कमी भयो भने १६ कला सम्पन्न भनिनेछैन। १६ कला सर्व र सम्पूर्ण यी तीनैको महिमा हो। सर्वगुण सम्पन्न भन्छौ, सम्पूर्ण निर्विकारी भन्छौ र १६ कला सम्पन्न भन्छौ। तीनै विशेषता चाहिन्छ। १६ कला अर्थात् सम्पन्न पनि हुनुपर्छ, सम्पूर्ण पनि हुनुपर्छ र सर्व पनि हुनुपर्छ। त्यसैले यो जाँच गर। सुनाएको थिएँ नि– यो वर्ष बहुत कालको हिसाब जम्मा हुने वर्ष हो र फेरि बहुतकालको हिसाब समाप्त पनि हुनेछ र अनि थोरै समय भन्न थालिनेछ, बहुतकाल होइन। त्यसैले बहुतकालको पुरुषार्थको लाइनमा आउनु छ। तब बहुतकालको राज्य भाग्य प्राप्त गर्ने अधिकारी बन्छौ। दुई चार जन्म पनि कम भयो भने बहुतकालमा गणना हुने छैन। पहिलो जन्म होस् र पहिलो प्रकृतिको श्रेष्ठ सुख होस्। एक-एक-एक होस्। सबैमा एक होस्। त्यसको लागि के गर्न पर्छ? सेवा पनि नम्बरवन, स्थिति पनि नम्बरवन तब त एक-एकमा आउँछौ नि! त्यसैले सत्ययुगको सुरुमा आउनेवाला, नम्बरवन आत्माको साथ पार्ट खेल्नेवाला हुनु छ। त्यसैले संवत् पनि आरम्भ तिमीले गर्नेछौ। सबैभन्दा पहिलो जन्ममा आउनेले नै पहिलो गते, पहिलो महिना, पहिलो संवत् सुरु गर्नेछन्। त्यसैले डबल विदेशीहरू नम्बरवनमा आउँछौ नि। अच्छा– फरिश्तापनको ड्रेस लगाउन आउँछ नि? यो पहिरन चम्किलो हुन्छ। यसको स्मृति र स्वरूप बन्नु अर्थात् फरिश्ताको ड्रेस धारण गर्नु हो। चम्किलो चीजले टाढैबाट आकर्षित गर्छ। त्यसैले यो फरिश्ताको पहिरनले अर्थात् फरिश्ता स्वरूपले टाढासम्म पनि आत्माहरूलाई आकर्षित गर्छ। अच्छा!
आज यू.के.को पालो हो। यु.के.वालाको विशेषता के हो? लण्डनलाई सत्ययुगमा पनि राजधानी बनाउँछौ या केवल घुम्ने स्थान बनाउँछौ? हो त संयुक्त राज्य! त्यहाँ पनि राजधानी बनाउँछौ वा केवल राजाहरू गएर चक्कर लगाउँछौ? फेरि पनि जुन नाम छ राजधानी भन्छन्। त्यसैले यस समयमा सेवाको राजधानी त छँदैछ। सारा विदेशको सेवाको लागि राजधानी त निमित्त हो नै। राजधानी नाम त ठीक छ नि! सबैलाई संगठित गर्ने राजधानी हो। सबै आत्माहरूलाई बाबासँग मिलाउने राजधानी हो। यु. के. वालालाई बापदादा भन्नुहुन्छ ओ. के. रहने। यु.के . अर्थात् ओ. के. रहने। कहिल्यै पनि कसैसँग सोध्यो भने– ओ.के., यस्ता छौ नि? यस्तो त भन्दैनौ– हुन त हो। लामो श्वास लिएर भन्छन्– हो। अनि जब पूरा ठीक हुन्छन् तब भन्छन् ओ. के., ओ. के. भन्नमा फरक हुन्छ। त्यसैले संगमयुगको राजधानी, सेवाको राजधानी जसबाट राज्य सत्ता अर्थात् रोयल परिवारका आत्मा तयार हुने प्रेरणा चारैतिर फैलियोस्। राजधानीमा राज्य अधिकारी बनाउने राज्य स्थान त भयो नि त्यसैले बापदादाले हरेक देशको विशेषतालाई विशेष रूपले याद गर्नुहुन्छ र विशेषताले सदा अगाडि बढाउनुहुन्छ। बापदादाले कमजोरीलाई देख्नुहुन्न, केवल इशारा दिनुहुन्छ। धेरै राम्रो धेरै राम्रो भन्दा भन्दै राम्रो बन्छन्। कमजोर छु, कमजोर छु मात्र भन्यौ भने झन् कमजोर हुन्छौ। एक त पहिल्यै कमजोर हुन्छन्, दोस्रो कसैले झन् भनिदियो भने मुर्छित हुन्छन्। जस्तोसुकै मुर्छित होस् तर उसलाई श्रेष्ठ स्मृतिको, विशेषताको स्मृतिको सञ्जीवनी बूटी खिलायौ भने मुर्छितबाट सुरजीत बन्नेछन्। सञ्जीवनी बूटी सबैको पासमा छ नि। विशेषताहरूको स्वरूपको दर्पण उसको सामुन्ने राख किनकि हरेक ब्राह्मण आत्माहरू विशेष हुन्। करोडौंमा कोही हौ नि। त्यसैले विशेष भयौ नि! केवल त्यस समयमा आफ्नो विशेषतालाई बिर्सेका हुन्छन्। त्यसको स्मृति दिलाउनाले विशेष आत्मा बन्नेछन्। जति विशेषताको वर्णन गर्नेछौ उसलाई स्वयं नै आफ्ना कमजोरीहरू अरू बढी स्पष्ट अनुभव हुँदै जान्छन्। तिमीले गराउनु पर्ने आवश्यकता पर्दैन। यदि तिमीले कसैको कमजोरी सुनायौ भने उसले लुकाउँछ। टार्छ, भन्छ– म यस्तो छैन। तिमीले विशेषता सुनाऊ। जबसम्म कमजोरी स्वयंले नै अनुभव गर्दैन, तबसम्म परिवर्तन गर्न सक्दैनौ। चाहे तिमीले ५० वर्ष मेहनत गरिराख। त्यसैले यो सञ्जीवनी बूटीले मूर्छितलाई पनि सुरजीत बनाउदै उडिराख र उडाइराख। यही यु.के.ले गर्छ नि। अच्छा।
लण्डनबाट अरू-अरू स्थानमा कति गएका छौ? भारतबाट त गएका छन्, लण्डनबाट कति गएका छन्? अस्ट्रेलिया कति गएका छौ? अस्ट्रेलियाले पनि वृद्धि गरेका छौ र अरू कहाँ-कहाँ गयौ? ज्ञान गंगाहरू जति टाढा-टाढासम्म बग्छौ त्यति राम्रो हुन्छ। यू. के., अस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोपमा कति सेन्टर छन्? (सबैले आ-आफ्नो संख्या सुनाए) मतलब वृद्धि त प्राप्त गरिरहेका छौ। अब कुनै विशेष स्थान रहेको छ? (धेरै छन्) त्यसको योजना पनि बनाइरहेका छौ नि। विदेशलाई यो लिफ्ट छ– धेरै सजिलै सेन्टर खोल्न सक्छौ। लौकिक सेवा पनि गर्न सक्छौ र अलौकिक सेवाको लागि पनि निमित्त बन्न सक्छौ। भारतमा फेरि पनि निमन्त्रणमा सेन्टर स्थापना हुने विशेषता रहेको छ तर विदेशमा स्वयंले नै निमन्त्रण स्वयंलाई दिन्छन्। निमन्त्रण दिने पनि स्वयं र पुग्ने पनि स्वयं हुन्छन् त्यसैले यो पनि सेवामा वृद्धि सजिलै हुने एउटा लिफ्ट मिलेको छ। जहाँ गए पनि दुई तीनजना मिलेर त्यहाँ स्थापनाको निमित्त बन्न सक्छन् र यसरी बनिरहने छन्। यसलाई ड्रामा अनुसार गिफ्ट भन, लिफ्ट भन– यो मिलेको छ किनकि थोरै समयमा सेवा समाप्त गर्नु छ त्यसैले तीव्रगति पनि हुनु छ तब त समयमा समाप्त हुनसक्छ। भारतको विधि र विदेशको विधिमा अन्तर छ त्यसैले विदेशमा चाँडो वृद्धि भएको छ र भइरहने छ। एकै दिनमा धेरै सेन्टर खुल्न सक्छन्। चारैतिर विदेशमा निमित्त रहने विदेशीहरूलाई सेवाको सहज अवसर छ। भारतकालाई हेर भिसा पनि मुश्किलले मिल्छ। त्यसैले यो अवसर छ– त्यहाँ रहनेहरू नै त्यहाँको सेवा लागि निमित्त बन्छन् त्यसैले सेवाको अवसर छ। जसरी लास्ट सो फास्ट जाने अवसर छ त्यसैगरी सेवाको अवसर पनि छिटै मिलेको छ त्यसैले गुनासो पनि रहने छैन– हामी ढिलो आयौं भनेर। पछि आउनेहरूलाई फास्ट अगाडि जाने अवसर पनि विशेष छ त्यसैले हरेक सेवाधारी हौ। सबै सेवाधारी हौ वा सेन्टरमा रहनेहरू मात्र सेवाधारी हुन्? जहाँ रहे पनि सेवा विना चैन हुन सक्दैन। सेवा नै चैनको निद्रा हो। भन्छन्– चैनले सुत्न पाउनु नै जीवन हो। सेवालाई नै चैनको निद्रा भन, सुत्नु भन। सेवा छैन भने चैनको निद्रा पनि छैन। सुनाएको थिएँ नि– सेवा केवल वाणीको होइन, हर सेकेण्ड सेवा होस्। हर संकल्पमा सेवा हुन्छ। कसैले पनि यो भन्न सक्दैन– चाहे भारतवासी चाहे विदेशमा रहनेहरूले, कुनै ब्राह्मणले यो भन्न सक्दैन– मलाई सेवाको अवसर छैन भनेर। बिरामी भए पनि मनसा सेवा, वायुमण्डल बनाउने सेवा, प्रकम्पन फैलाउने सेवा त गर्न सकिन्छ। कुनै पनि प्रकारको सेवा गर तर सेवामा नै रहनु छ। सेवा नै जीवन हो। ब्राह्मणको अर्थ नै सेवाधारी। अच्छा।
सदा उड्तीकला सर्वको भला स्थितिमा स्थित रहने, सदा स्वयंलाई फरिश्ता अनुभव गर्ने, सदा विश्वको अगाडि ईष्ट देवको रूपमा प्रत्यक्ष हुने देव आत्माहरू, सदा स्वयंलाई विशेष आत्मा सम्झेर अरूलाई पनि विशेषताको अनुभव गराउने विशेष आत्माहरूलाई बापदादाको याद-प्यार एवं नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुडमर्निङ्ग, नमस्ते।
पार्टीहरूसँग:– सदा स्वयंलाई कर्मयोगी अनुभव गर्छौ? कर्मयोगी जीवन अर्थात् सदा हर कार्य गर्दा पनि यादको यात्रामा रहनेवाला। यो श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाबाका बच्चाहरूले नै गर्छन् र सदा सफल हुन्छन्। तिमीहरू सबै कर्मयोगी आत्माहरू हौ नि। कर्ममा रहेर न्यारा र प्यारा रहने– सदा यही अभ्यासले स्वयंलाई अगाडि बढाउनु छ। स्वयंको साथ-साथमा विश्वको जिम्मेवारी सबैमाथि छ। तर यी सबै स्थूल साधन हुन्। कर्मयोगी जीवनद्वारा अगाडि बढ्दै जाऊ र बढाउँदै जाऊ। यस्तो जीवन नै अति प्रिय जीवन हो। सेवा पनि होस् र खुसी पनि होस्। दुवै साथ-साथमा ठीक छ नि। गोल्डन जुबली त सबैको हो। गोल्डन अर्थात् सतोप्रधान स्थितिमा स्थित रहनु। त्यसैले सदा आफूलाई यो श्रेष्ठ स्थितिद्वारा अगाडि बढाउँदै जाऊ। सबैले सेवा राम्रोसँग गर्यौ नि! सेवाको अवसर पनि अहिले नै मिल्छ। फेरि यो अवसर समाप्त हुनेछ। त्यसैले सदा सेवामा अगाडि बढ्नु छ। अच्छा।
बाबाको छत्रछायाँको अनुभवद्वारा विघ्न-विनाशकको डिग्री लिने अनुभवीमूर्त भव
जहाँ बाबा साथमा हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। यो साथको अनुभव नै छत्रछायाँ बन्छ। बापदादाले बच्चाहरूको सदा रक्षा गर्नुहुन्छ नै। परीक्षा आउँछन् तिमीहरूलाई अनुभवी बनाउनको लागि। त्यसैले सम्झनुपर्छ– यी परीक्षाहरू कक्षा अगाडि बढाउनको लागि आएका हुन्। यसैबाट नै सदाको लागि विघ्न विनाशकको डिग्री र अनुभवीमूर्त बन्ने वरदान मिल्छ। यदि अहिले कसैले थोरै चर्को स्वर गर्यो वा कसैले विघ्न पार्यो भने पनि विस्तारै-विस्तारै चुप हुनेछन्।
जो समयमा सहयोगी बन्छन् तिनीहरूलाई एकको पदमगुणा फल मिल्छ।